Maraoka: “Gaza Avokoa Izahay” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2017 3:43 GMT
(Fanamarihana: Ity lahatsoratra ity dia nivoaka tamin'ny taona 2009)
Mampatsiahy antsika i Hicham ao amin'i Al Miraat, izay nandefa ny sary eto ambany fa Gaza avokoa izahay ary nanao ity fanambarana ity tamin'ny lahatsoratra mitokana:
Noho ny antony ara-potokevitra, tsy mpanohana ny Hamas aho, saingy na tia azy na tsia, misy ireo olona nosifidian'ny Palestiniana hitarika azy ireo. Na izany aza, madio kokoa ny Hamas raha oharina amin'ny Fatah (mpifanandrina aminy lehibe indrindra ara-politika) ary mendrka kokoa tamin'ny fanajana ny dingana demaokratika tao Palestina hatramin'ny niforonany. Ary izany safidy demaokratika izany no vokatra voajanahary avy amin'ny taonan'ny fahoriana, fanorisorenana, fanaovana antsojay miverimberina ataon'ny Israeliana ho an'izay mitaky fitantanana, ary mazava ho azy ny famonoana ara-politika sy ny fampihorohoroam-panjakana.
Nandritra ny taona 50, 60, 70 ary koa tamin'ny taona 80 mihitsy aza, lahika ny ankamaroan'ireo milisy Palestiniana ary miady indrindra amin'ny ady isian'ny fahafahana “mahazatra” (izany hoe tsy mikendry sivily, ary misoroka ny tetikady fampihorohoroana, ankoatra ny fanavahana), namaly tamin'ny herisetra mitovy i Israëly ary nandrisika an'i Palestina tsikelikely tany amin'ny zavatra tafahoatra.
Eatbees, mpikambana am-boninahitra ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Meksikana izay monina ankehitriny ao Etazonia nandefa sary mampivarahontsana ary nanamarika hoe:
Tahaka ny maro, mahatsiaro malahelo aho manoloana ny zava-mitranga ao Gaza nandritra ny andro vitsy lasa.
Nivadika tebiteby izany alahelo izany raha namaky ny fitantarana iray tao amin'ny fampahalalam-baovao Amerikana aho, izay tsy manova mihitsy ny “zo hiaro tena” an'i Israely sy manome tsiny ny Hamas na ho an'ny sivily niharam-boina aza.
Mikasika ny olana sy ny adihevitra, handefitra amin'ilay mpitarika Palestiniana Mustafa Barghouthi aho, izay mahafantatra ny zavatra lazainy.
Toa hitohy hatrany mandritra ny andro sy herinandro maromaro ny ady. Maniry aho mba hitovy amin'ny traikefan'izy ireo tao Libanona tamin'ny taona 2006 ihany ny vokatra ao Israely.
Nitatitra ny View From Fez fa feno hery tanteraka ireo Maraokana mpanao fihetsiketsehana:
Nisy ireo fihetsiketsehana roa karazana vao haingana, samy hafa mihitsy ny olan'ny roa tonta. Omaly, nikarakara sit-ins manameloka ny fanafihana Israeliana any Gaza ny Maraokana tao afovoan-tanàna. Samy nentina ny sainam-pirenena Maraokana sy Palestiniana, ary mpanao fihetsiketsehana an'arivony no naneho ny firaisankinany amin'ny vahoaka Palestiniana.
Mohamed el Alami nanao antso hisian'ny fandriampahalemana tao amin'ny bilaoginy:
Mijaly ny loatra ny vahaoka Palestiniana. Namono lehilahy, ankizy amam-behivavy ny Israeliana …. Nahoana i Isiraely no manao izany? tsy mahatakatra ny tanjony rehetra izy satria ny herisetra dia miteraka herisetra. Indrisy, tsy misy ny fandriampahalemana ankehitriny, saingy misy kosa ny ady, fandripahana, fandringanana, loza …
Manantena aho fa hisy ny fampitsaharana ady, satria tena mijaly mafy ny sivily.
Mila fandriampahalemana isika fa tsy ady, tsy herisetra sy tsy fitiavan-tena.
Gaza, miaraka aminareo izahay.
Hicham kosa nampatsiahy antsika hoe: